Wolfram Alpha ကို မေးခွန်းထုတ်ခြင်း | Sanchaung Journal
Wolfram Alpha ကို မေးခွန်းထုတ်ခြင်း
May 28, 2009 freebird	Leaveacomment
Wolfram Alpha ဆိုတာကတော့ သူ့ကိုမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အဖြေ ထုတ်ပေးတဲ့ Answer-Engine တစ်မျိုးပါ။ Google နဲ့ ကွဲပြားတဲ့ အချက်ကတော့ Wolfram Alpha က ကိုယ်ရှာလိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ အတွက် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေ တသီတတန်းကြီးကို ချပြမှာ မဟုတ်ပဲ သူတွက်ချက်လို့ ရတဲ့ အဖြေကိုပဲ ထုတ်ပေးမှာပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် လိပ်စာကတော့ http://www.wolframalpha.com ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိန်းဂဏန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့၊ အတွက်အချက်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် အချက်အလက်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အမေးအဖြေတွေ နဲ့ ပိုပြီး သင့်လျော်ပါတယ်။ မေလ ၁၅ ရက်နေ့က Wolfram Alpha ကို စတင် ထုတ်လွှတ် ခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ပြောပြလို့ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ ဝူဖရမ်ကို နည်းနည်း မေးခွန်းတွေ ထုတ်ကြည့် ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ မေးခွန်းကနေ စမေးကြည့်ပါတယ်။
၁။ Current time in Yangon (ရန်ကုန်မှာ ဘယ်အချိန် ရှိပြီလဲ။)
၁၂ နာရီ ၄၂ မိနစ် ရှိပြီလို့ ဖြေပါတယ်။ စင်ကာပူနာရီနဲ့ ရန်ကုန်နာရီကိုတောင် နှိုင်းယှဉ်ပြလိုက်ပါသေးတယ်။ အောက်က ပုံမှာ ကြည့်ပါ။
နောက်မေးခွန်း တစ်ခု မေးကြည့်ပါမယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ အချက်အလက်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းပါ။
၂။ Population in China (တရုတ်ပြည်ရဲ့ လူဦးရေ ဘယ်လောက် ရှိလဲ။)
၂၀၀၇ ခုနှစ် စာရင်းဇယား အရ ၁.၃ ဘီလီယံလို့ ဖြေပါတယ်။ သူ့မှာ အချက်အလက်တွေတော့ သိမ်းထားပုံ ရပါတယ်။ အတွက်အချက် နည်းနည်းပါတာ မေးကြည့် ပါဦးမယ်။
၃။ How old will Obama be in 2015? (၂၀၁၅ ခုနှစ် ကျရင် အိုဘားမားရဲ့ အသက် ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ။)
၅၃ နှစ် လို့ ဖြေပါတယ်။ မဆိုးဘူး။ တွက်တတ်ချက်တတ်သားပဲ။ အဲဒီတော့ ခုန မေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းကို နည်းနည်း ကွန့်ပြီး ပြန်မေးကြည့် ပါဦးမယ်။
၄။ population of China in 2020 (၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ပြည်မှာ လူဦးရေ ဘယ်လောက် ရှိမှာလဲ။)
Wolfram စိတ်ညစ် သွားပါပြီ။ သူ့မှာ အချက်အလက် မရှိပါဘူး။ အဲဒီတော့ No Data Available ပြောပြီး ရှိတဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ လူဦးရေ ဂရပ်ဖ်ကိုပဲ ပြန်ထုတ်ပြပါတယ်။ မြန်မာ ယူနီကုတ်အကြောင်း နည်းနည်း မေးခွန်း ထုတ်ကြည့် ပါဦးမယ်။
၅။ U+1025 (ယူနီကုတ် အက္ခရာအမှတ် ၁၀၂၅ အကြောင်းပြောပါ။)
“ဥ” အက္ခရာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြီး “ဥ” ရဲ့ ပုံကို ပြပါတယ်။ အဲဒီအက္ခရာဟာ မြန်မာ အက္ခရာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဖြေပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ က ကြီးကို မြန်မာလို ရိုက်ထည့်ကြည့်တော့ ကကြီး အက္ခရာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ။ Wolfram က သင်္ချာတော်တယ် ဆိုလို့ သင်္ချာနည်းနည်း မေးကြည့်ပါဦးမယ်။
၆။ Integrate 3x^3 + 2x^2 + 4x +5( Integrate လုပ်ခိုင်းတာပါ။ သမူဟ လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ မြန်မာလိုတော့ မပြန်တော့ပါဘူး။ )
အဖြေ တွက်ပေးပါတယ်။ ကျောင်းမှာ သင်္ချာတွက်ရတဲ့ အချိန်တုန်းက Wolfram သာ ရှိရင် အတော်ပဲ လို့ တွေးပါတယ်။ အခုလည်း တွက်တော့ တွက်နေရတုန်းပါပဲ။ နောက်ဆိုရင် နည်းနည်းတော့ အထောက် အကူပေးမှာပါ။ ဆက်သွယ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာနဲ့ ဆိုင်တာ နည်းနည်း မေးကြည့်ပါမယ်။
၇။ Butterworth Filter (Butterworth Filter အကြောင်း မေးကြည့်တာပါ။)
မဆိုးပါဘူး။ Butterworth Filter နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ အတော်များများကို ပြပေးပါတယ်။ အာကာသအကြောင်း သိသလားလို့ မေးကြည့် ပါဦးမယ်။
၈။ Distance from Alpha Centauri to Earth (အယ်လ်ဖာ စင်တောရီ ကြယ်နဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ ဘယ်လောက်ဝေးသလဲ။)
အလင်းနှစ် ၄.၃၉ နှစ် ဝေးတယ်လို့ ဖြေပါတယ်။ နီးနီးနားနားက မြို့တွေ အကွာအဝေးကို မေးရင်ကော သိမလား စမ်းကြည့်ချင်လာပါတယ်။
၉။ Distance from Yangon to Mandalay (ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး ဘယ်လောက်ဝေးသလဲ။)
၃၅၇ မိုင်လို့ ဖြေပါတယ်။ အဲဒါက ကားလမ်းအရှည် မဟုတ်ပါဘူး။ မြေပုံပေါ်မှာ မျဉ်းဖြောင့်ဆွဲပြီး တိုင်းထားတဲ့ အကွာအဝေးပါ။ နောက်ဆုံးတော့ Wolfram ကွန်ပြူတာ ဟုတ်မဟုတ် စမ်းကြည့်ရပါမယ်။
၁၀။ Is Miley Cyrus pretty? ( Miley Cyrus လှသလားလို့ မေးကြည့်တာပါ။)
သူ မသိပါဘူးတဲ့။ Miley Cyrus ရဲ့ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်အချို့ကိုတော့ ထုတ်ပေးပါတယ်။ ငတုံး။ လှသလား မလှသလား တောင် မကြည့်တတ်လို့ ကွန်ပြူတာ ဖြစ်နေတာ။
Wolfram နဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့ ဖြစ်နိုင်ပါစေ။
Source : http://phoonuthit.blogspot.com/2009/05/wolfram-alpha.html
Previous Postသင့်တော်တဲ့ အလုပ်Next Postအနားသတ်အချစ်